an-trano > Vaovao momba ny indostria
Mampiseho ny tantara ao anaty mahatalanjona ao amin'ny indostrian'ny jiro LED!
Na inona na inona indostria misy anao, misy foana ny "lalàna adaladala" sy "miafina". Avy eo, karazana "adaladala" inona no misy ao amin'ny indostrian'ny jiro? Ity lahatsoratra ity dia mamelabelatra ny lafiny efatra amin'ny tolo-kevitra amin'ny tetikasa, ny fanamarinana, ny tolo-kevitra sandoka, ary......
Ny fironana ankapobeny amin'ny indostrian'ny jiro
Taorian'ny Kongresy Nasionaly faha-19 an'ny Antoko Kaominista any Sina, orinasa maro no manana fomba fijery tsy miova amin'ny firoboroboan'ny indostria sinoa ary manamafy fa ny fampandrosoana ara-toekaren'i Shina dia efa hahatratra sehatra vaovao. Ny fanarenana ny filaminana, ny fanarenana ny fitond......
Ny fahavaratra mando sy ririnina any Chicago dia mametra ny fampiasana ny lavarangana mpanjifa. Mba hamahana ity olana ity dia mikendry ny hamorona efitrano masoandro feno hazavana sy mahafinaritra ary hamalefaka ireo Toerana efatra misy tsipika mikoriana ireo mpanao mari-trano.
Fahazoan-dàlana amin'ny jiro LED jiro efatra
Matetika dia be dia be ny karazan-trano, fa an'ny tranon'ny biraon'ny governemanta, tranon'ny birao ara-barotra, tranobe ambany trano ary karazan-trano efatra eo amin'ny gorodon'ny fivarotana.
Ny rafitra fanamafisana jiro dia mampiasa aliminioma ho fitaovana. Noho ny fitondra hafanana ambany amin'ny plastika dia tsy mahafeno ny fepetra takiana, tsy azo ampiasaina amin'ny sehatry ny LED termal. Vao tsy ela akory izay, ny orinasa DSM dia mamoaka karazana plastika conductive vaovao, mitazona......
Indostrian'ny jiro LED nateraky ny "blowout" tamin'ny tsena avo
Manam-pahaizana maro ao amin'ny indostria izay nitondra ny "blowout" an'ny tsena, ny fivoarana manerantany ny teknolojia LED, ny fanavaozana ny jiro, ny fahombiazan'ny vokatra dia nihatsara haingana, ny fihenan'ny vidin'ny famokarana, ny LED hatrany hatrany amin'ny sehatry ny jiro, izay LED amin'ny ......